Ezempilo - Mag Incredible
7 Superfoods Ukulwa Ukuqunjelwa
Kwabaningi, ukuqunjelwa kungenye ingxenye yokuphila kwansuku zonke. Balwa nokuqunjelwa kanye nokungakhululeki nsuku zonke ngamaphilisi amanzi, ama-diuretics, namaphilisi okusiza ukugaya. Nakuba la maphilisi enzelwe ukusiza umzimba wakho, angaba nemiphumela engemihle. Ngenhlanhla, kukhona…
Ungahlala Kanjani Uqinisekile Ngokunqamuka Kwesikhathi
Kunezimpawu noma izimpawu ngaphandle nje ezingokomzimba abesifazane ababa nazo ezigabeni zokunqamuka kokuya esikhathini. Kungafika nezinguquko ezingokomzwelo nezinselele. Lezi zinselele kunzima kwabanye besifazane ukubhekana nazo ngesikhathi sokuya esikhathini. Ngakho-ke ziyizimbangela ezinkulu zokungazethembi…
Ukuhlolwa Kwezokwelapha Kwangaphambi Kwenqubomgomo Kwabantu Abadala
Ukuhlolwa kwezokwelapha ngaphambi kokuthenga inqubomgomo kukwenza uzizwe ungcono. Ngaphezu kwalokho, uma unanoma yisiphi isifo esivele sikhona, khona-ke ungenza noma yini ukugwema ukuhlolwa kwezempilo ngenxa yazo zonke izinhlobo zemicabango emibi ezungezile. Sawubona kodwa awazi okungcono kakhulu…